व्यंग्य - नेपाल
लक्ष्मण गाम्नागे, वैशाख १३, २०७६
यस वर्षको एसईई सकियो । धेरै कलेजले विद्यार्थी तान्न अनेक विज्ञापन-पर्चा बाँडे । सञ्चार माध्यममा प्रचारप्रसार गरे । विद्यार्थीलाई डाक्टर, इन्जिनियर, एकाउन्टेन्ट, पाइलट, प्रशासक बन्न वा विदेश गएर राम्रा काम पाउन सकिने आश्वासन दिँदै आकर्षण गरे ।
लक्ष्मण गाम्नागे, वैशाख ६, २०७६
नेपालको इतिहासमै विगत वर्षको तुलनामा ०७५ बिल्कुलै भिन्न रह्यो ।
दुई तिहाइको वामपन्थी सरकारले मच्चाएको अनवरत होहल्लाले यो वर्ष 'होहल्ला वर्ष' को रुपमा स्थापित भयो । प्रतिपक्ष, सञ्चार माध्यम र सामाजिक सन्जालले सरकारलाई होहल्ला महाअभियानमा ठूलो सहयोग पुर्‍याए । नेपालको सामान्यज्ञानमा '०७५ केका लागि प्रसिद्ध थियो ?' भन्ने प्रश्न र 'होहल्लाका लागि' भन्ने उत्तरले मान्यता पाउने पक्का भयो ।
यो वर्ष इतिहासमै नगरिएका अद्भुत कार्य गरेको, ती काम देखेर संसारै आश्चर्यचकित भएको हल्ला सरकारले चलायो भने सरकारले सिन्को पनि नभाँचेको हल्ला प्रतिपक्षले फैलायो । सरकारले यो नेपालको इतिहासकै सर्वोत्कृष्ट सरकार रहेको हल्ला मच्चायो भने प्रतिपक्षले इतिहासकै सर्वाधिक निकम्मा सरकार यसैलाई ठहर गरेको हल्ला फिँजायो ।
सरकारले हरेक दिन नयाँ काम थालनी गरेको हल्ला चलायो । सुरुमा सरकारले यातायात सिन्डिकेटको ढाड भाँचेको भन्ने हल्लाले बजार बेस्सरी तात्यो । केही समयपछि प्रतिपक्षीले सिन्डिकेट तोडेको सरकारको हल्ला हल्लै मात्र भएको हल्ला फैलाए । अहिले सिन्डिकेट झन् बलियो भएको हल्ला छ ।
सुन तस्करीको हल्ला यो वर्षको सुपरहल्लामध्येको एक थियो । तस्करीको जालोलाई सरकारले तहसनहस पारेको हल्लाविरुद्ध खास तस्करहरु सरकारले जोगाएर केही भरिया मात्र समातेर थुनेको भन्ने हल्ला प्रतिपक्षीबाट आयो ।
निर्मला हत्याकाण्डका अपराधी पक्राउको होहल्लाले लामै समय सरकारलाई हल्लायो । प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री, गृहमन्त्रीहरुकै मुखबाट हत्यारा पत्ता लागेको हल्ला आयो तर त्यो हल्ला हावामा हरायो । सरकारले जोगाउनैपर्ने मान्छे अपराधमा संलग्न भएकाले अपराधी पत्ता नलागेको भन्ने हल्ला पनि बजारमा चल्यो ।
भेनेजुएला काण्डमा नेकपाले अमेरिकाविरुद्ध कडा वक्तव्य जारी गरेकाले अब अमेरिकाले नाकाबन्दी गर्छ भन्ने हल्लाको हुन्डरी चलिरहेकै बेला प्रचण्डलाई अमेरिकाले रातो कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरेको हल्ला चलेपछि हुन्डरी पनि सेलायो ।
चिनियाँ रेल आउने हल्ला, बुटिक एयरपोर्टको हल्ला, पानीजहाज कार्यालय उद्घाटन गरेर प्रधानमन्त्रीले नपत्याउनेहरुलाई जहाजको टिकट काट्न चुनौती दिएको हल्ला आदिले यो वर्षलाई होहल्ला वर्ष बनाउनमा भूमिका खेले । मेलम्ची खानेपानीको हल्ला त अझै कति वर्षसम्म चलिरहने हो, निश्चित छैन । नयाँ प्रधानन्यायाधीशले न्याय क्षेत्रमा ठूलै तहल्का मच्चाउने हल्ला आउँदाआउँदै उनकै सहकर्मीहरुले राजीनामा माग्न थालेको हल्ला पनि आउन थालिसक्यो । डाक्टर गोविन्द केसीले यसपालि सरकारसँग कुनै सम्झौता नगरी अनशन तोडेर हल्लाको बजारमा नयाँ आयाम थपिदिए ।
प्रधानमन्त्रीले भएभरका शक्तिशाली निकायलाई आफू मातहत ल्याएर अधिनायकवाद चलाउन खोजेको हल्ला प्रतिपक्षी दलले चर्कोसँग चलायो । बेलाबेला राष्ट्रपतिविरुद्ध पनि अनेकौँ होहल्ला भए ।
जेहोस्, यो हल्लैहल्लाको देश भन्ने कवि भूपि शेरचनको कविताले सर्वाधिक सार्थकता पाएको ०७५ हल्लैहल्लाको उत्सवमय वातावरणमा बित्यो । अब ०७६ मा अझै नयाँ र ठूला होहल्ला सुन्ने शक्ति हामी सबैमा प्राप्त होस् । नयाँ वर्ष २०७६ को मंगलमय शुभकामना !
लक्ष्मण गाम्नागे, चैत्र ८, २०७५
तयारी फाइल लिएर कार्यालय पुगेँ, पहिलो दिनको तालिकाअन्तर्गत । डेढ घन्टाजति लाइन बसेर प्राप्त दस रुपैयाँको भौचरसहित राजस्व शाखा हुँदै कम्प्युटर इन्ट्री गर्ने कोठामा पुगेर फाइल लाइन लाग्यो ।
लक्ष्मण गाम्नागे, चैत्र १, २०७५
लाखौँ–करोडौँ भ्युअर्स र फलोअर्स बनाउन पाइयोस् । सारा दर्शकश्रोतालाई समाचारको आनन्द र शत्रुविरुद्ध उत्तेजना जगाउन सकियोस् र प्रतिस्पर्धी मिडिया सबैलाई उछिनेर एक नम्बर हुन पाइयोस् ।
लक्ष्मण गाम्नागे, फाल्गुन १४, २०७५
नमस्कार ! मलाई चिन्नुभयो होला । पाठकले पाठकलाई नचिन्ने कुरै भएन । नाम त के बताऊँ ! आफ्नो नाम बताउन आफैँलाई लाज लाग्छ । केहीले मेरो नाम लाजनारायण राखेका छन्, त्यही सम्झिनुस् ।
लक्ष्मण गाम्नागे, फाल्गुन १०, २०७५
गुटगुटका नेताहरुले सलाई कोरुन्, कार्यकर्ताहरुले दाउरा जोरुन्, सञ्चार माध्यमहरुले घिऊ हालून् । धूवाँ मात्र पुतपुताएर भएन, आगो बालून् । सम्बन्धितहरुले हाम्रो स्वास्थ्य बिग्रन नदिऊन्, रमिता हेर्ने वातावरण मिलाइरहून् ।
लक्ष्मण गाम्नागे, माघ २४, २०७५
दुई तिहाइको सरकार बनेको एक वर्षमा पनि केही भएन भनेर निरास नहोऔँ । अगाडि बढ्न बाधा गर्ने तगारा एकपछि अर्को गर्दै पन्छाउँदै लगेकाले अब सरकारले गति लिन्छ भन्ठानेर मनमा शान्ति कायम गरौँ ।
लक्ष्मण गाम्नागे, माघ १६, २०७५
राजनीतिक पक्ष–प्रतिपक्षका हन्तकालीमा हसुर्न नपाउने कुरामा मारामार हुनेछ, ठेलाठेल हुनेछ, कुइनाले कोखामा हान्ने र चोरऔँलोले नाकमा घोच्ने काम हुनेछ । हसुर्ने विषयमा भने लपक्क अँगालो हालेर एकअर्कालाई चाटाचाटै गर्नेछन् ।
जलवायु परिवर्तनले गर्दा
लक्ष्मण गाम्नागे, माघ ११, २०७५
मानमर्यादा नै बिर्सेर उनीहरु एकआपसमा आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र होइन, कुटाकुटमै अग्रसर हुने क्रियाकलापमा पनि ग्लोबल वार्मिङको प्रभाव प्रस्टै देखिएको छ ।
लक्ष्मण गाम्नागे, माघ २, २०७५
उनलाई जुन संस्थामा लगेर राखे पनि आफ्नो मुख्य कर्तव्य धन आर्जनमा लिप्त भइहाल्ने प्रवृत्ति रहेछ ।
लक्ष्मण गाम्नागे, पुस २६, २०७५
ल हेर्नुस् माननीयज्यू, सञ्चार माध्यमको पासोमा हामी मान्छे त के स्वयं भगवान् पनि पर्न थाले ।